Izindaba - Inhlangano yezokwelapha yomhlaba wonke iCochrane: Ama-E-cigarettes anomthelela wokuyeka ukubhema
Inhlangano yezokwelapha yomhlaba wonke uCochrane: Ama-E-cigarettes anomphumela wokuyeka ukubhema
Ngo-Okthoba 26, iCochrane Collabation, okuyinhlangano yezemfundo yamazwe omhlaba yokwelapha okusekelwe ebufakazini, yakhombisa ekubuyekezweni kwayo kwakamuva kocwaningo.
UCochrane uveze ukuthi ukusebenzisa i-nicotine e-cigarettes ukuyeka ukubhema kungcono kunokusebenzisa i-nicotine therapy esikhundleni kanye ne-e-cigarettes engena-nicotine.
UCochrane ubuyekeze umbhali obambe iqhaza, uProfesa Peter Hajek, umqondisi weQembu Lokucwaninga Lokuxhomekeka Kogwayi eQueen Mary University yaseLondon, uthe: “Lokhu kubhekwa okusha kwama-e-cigarettes kukhombisa ukuthi kubantu abaningi ababhemayo, i-e-cigarette iyithuluzi elisebenzayo lokuyeka ukubhema . ”
Isungulwe ngonyaka we-1993, iCochrane yinhlangano engenzi nzuzo ebizwa nge-Archiebaldl.cochrane, umsunguli wemithi esekela ubufakazi. Futhi iyinhlangano egunyazwe kakhulu yezemfundo yemithi esekwe ebufakazini emhlabeni. Kodwa-ke kunezisebenzi zokuzithandela ezingaphezu kwama-37,000 emazweni ayi-170.
Kulolu cwaningo, uCochrane uthole ukuthi izifundo ezingama-50 emazweni ayi-13 kubandakanya i-United States ne-United Kingdom zibandakanya ababhemayo abangu-12430 abadala. Imiphumela yocwaningo ikhombisa ukuthi okungenani izinyanga eziyisithupha, abantu abaningi basebenzisa i-nicotine e-cigarettes ukuyeka ukubhema kunokusebenzisa i-nicotine replacement therapy (njengezitikha ze-nicotine, i-nicotine gum) noma i-e-cigarettes engafaki i-nicotine.
Ngokuqondile, kubo bonke abantu abayi-100 abasebenzisa i-nicotine e-cigarettes ukuyeka ukubhema, abantu abayi-10 bangakuyeka ngempumelelo ukubhema; kubo bonke abantu abayi-100 abasebenzisa i-nicotine e-cigarettes ukuyeka ukubhema, abantu abayi-6 kuphela abangakwazi ukuyeka ukubhema ngempumelelo, okuphezulu kunezinye izindlela zokwelapha.